Ukuphupha ngeBauernstube Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igumbi lendlu yasefama ligumbi elinikezwe ngesimbo selizwe. Ifenitshala yeRustic eyenziwe ngomthi omdala omdala inika igumbi umoya ohlekisayo nopholileyo apho unokuziva ukhawuleze ekhaya. Igumbi lokuhlala elisefama limema wena kwindibano emnandi kunye nefenitshala yayo ye-rustic. Indawo yokubasa umlilo egqumayo, indawo yokupheka esekhaya-indawo yokuhlala yegumbi lokuhlala inika iindwendwe zayo imeko ekhethekileyo.
Namhlanje, iihostele ezininzi okanye iivenkile zokutyela zinegama "iBauernstube". Igama lityhila kubo bonke abatyeleli ukuba ayisiyiyo kuphela into yakudala ekusekweni, kodwa imenyu nayo ibanzi.
Ephupheni, ngaba uye wahlala kwigumbi lasefama kwaye ufuna ukwazi ukuba oku kutolikwa njani ngokwembono yokutolikwa kwephupha? Emva koko zama ukukhumbula iinkcukacha ngokunjalo, njengoko zinokuququzelela ukutolika kwakho.
1 Uphawu lwephupha «Bauernstube» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Bauernstube» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Bauernstube» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Bauernstube» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umfanekiso wephupha elithi "Bauernstube" uboniswa ngephupha elinxulumene noluntu olukhulu, ngokoluvo ngokubanzi, oku kubhengeza okusondeleyo. Ukubhiyozela usapho phakathi. Ngapha koko, iBauernstube ikwathetha phu melelaoya kuyiphumeza kancinci kodwa ngokuthe chu.
Ukuba umntu ophuphayo ungena kwigumbi lelizwe elifudumeleyo nelicocekileyo, banokuziva bonwabile kwaye bekhuselekile ephupheni. Ukutolikwa kwesi siganeko sephupha kuyafana. Oku kuyabona apha kubonisa ukuba umntu ukhuselekile kwaye ukhuselekile indawo ezinzileyo ifunyenwe. Oku kunokuhambelana nobume bobuchwephesha kunye nobomi babucala kunye neqabane okanye isangqa sabahlobo.
Kwelinye icala, iitoliki zamaphupha zijonga imeko yamaphupha ngendlela egwenxa, apho umntu ashiya igumbi lasefama kwaye aphume kubushushu begumbi aye kubanda. Ilahleko zisondele. Iimeko zobomi ezibonakala zizinzile ukuza kuthi ga ngoku nazo zingangcangcazela kwaye zibangele ukungaqiniseki kunye nentlungu.
Uphawu lwephupha «Bauernstube» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba ujonga umfanekiso wephupha "iBauernstube" ngokwembono yengqondo, uhlala ubona ukulangazelela komntu ophupha imvakalelo yokuqala yekhaya. Usenokunqwenela ukuba ngumntwana. Buyela kwixesha elingenaxhala apho wawufumana khona ikhaya okhulele kulo njengendawo yokufudumala nokhuseleko. Kodwa mhlawumbi ukhe wahlangabezana nokuchasene ngqo. Usenokuba uyayikhumbula le mvakalelo ingaphakathi yokuba yeyendawo ethile kwaye uziva ukuba uye wamkelwa apho.
Rhoqo kukho igumbi lendawo elibonakala kuthi emaphupheni Yonwabela ubomi y ulonwabo idityanisiwe. Ukuba uziva ukhululekile kwimeko yokuphupha, lixesha lokuba lo mntu kuthethwa ngaye athathe ikhefu kubomi bemihla ngemihla kwaye azinikezele kwizinto ezintle ebomini.
Unokukhumbula kwakhona ukuba abantu batya okanye basela kwigumbi lasefama. Ke kunokuba luncedo ekulaleni ukuvumela olu lwazi longezelelekileyo ukuba lutolike ekutolikeni ngephupha. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo intsingiselo yeesimboli ezihambelanayo (ubusitya ntoni? Usele ntoni?) Kuhlalutyo lwakho lwamaphupha.
Uphawu lwephupha «Bauernstube» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha elithi "Bauernstube" luphawu lokuchazwa ngokwasemoyeni kwephupha. Yoluntu. Igumbi lasefama linemfuneko yamaphupha okubuyela kwimvelaphi yawo.